SHIR MUHIIM U AH CIIDANKA SOOMAALIYA AYAA KAMPALA KA FURMAYA
Madaxda Amniga ee Bariga Afrika ayaa magaalada Kampala ee caasimadda dalka Uganda waxa ay ku leeyihiin shirweyne ay uga xaajoonayaan xaalada ammaanka ee gobolka. Shirkan ayaa waxaa xoogga lagu saarayaa arrimo ay ka mid yihiin hormarka, tayada Dowladaha iyo qaabka looga hortagi karo halista ka imaaneysa amni darada
Shirkan ayaa waxaa xoogga lagu saarayaa arrimo ay ka mid yihiin hormarka, tayada Dowladaha iyo qaabka looga hortagi karo halista ka imaaneysa amni daaan 14 Dowladood ayaa Soomaaliya waxaa ku metelaya Korneel Muuse C/qaadir Xasan oo ka tirsan hoggaanka xiriirka Dibadda Booliska Soomaaliya.
Korneel Muuse C/qaadir oo la hadlay BBC-da ayaa sheegay shirkan waxyaabaha ugu waa weyn ee looga hadlayo in ay ka mid thaya tayeynta Ciidanka AMISOM, oo dagaal kula jira ururka Al-shabaab.
Wuxuu sheegay shirkan ilaa hada in la iskula soo qaaday sidii mustaqbalka dhow Shabaab looga saari lahaa dalka, Ciidamada xoogga dalkana dib u dhis loogu sameyn lahaa, si mustqabalka dhow ay dalka ugala wareegaan Ciidanka AMISOM.
Shirkan oo maalmo kooban ka socon doona magaalada Kampala ayaa la filayaa gaba gabiisa in laga soo saaro war-murtiyeed, ay ku mideysan yihiin Dowladaha shirkaasi ka qeyb galaa.